အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - Silbano Garcia က, II ကို။
Silbano Garcia က, II ကတရားဒေသနာ။
Silbano Garcia က, II ကို။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များတစ်ခုဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, နှင့်အင်တာနက်ဝန်ကြီးဌာနများ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မေလ 1, 1995 တွင်သူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဖြစ်လူသိများသည်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အဘို့အပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကို Gateway မှာစေလွှတ်အတွက်ဆာခဲ့ Church-of-Christ.org. သခင်ဘုရားငါးအသငျးတျောမြားကိုထူထောင်အတွက်သူ့ကိုအသုံးပြုသောထားပါတယ်, သူသည်သညျယရှေုခရစျ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ 1,526 စိတ်ဝိညာဉ်၌ဗတ္တိဇံသိရသည်။ သာဘုရားသခငျသညျအငျတာနကျဝန်ကြီးဌာနများကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းကျမ်းစာသင်အံခြင်းနှင့်အဝေးရောက်မှတဆင့်ခရစ်တော်ထံသို့လာကြသူအသက်ဝိညာဉ်၏နံပါတ်သိတယ်။ အစ်ကို Garcia ကအင်တာနက်ကိုဧဝံဂေလိ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသည်အင်တာနက်ဧဝံဂေလိရှေ့ဆောင်အဖြစ်လူသိများဖြစ်လာသည်။ သူသညျယရှေုခရစျ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန့်ပွားများအတွက်မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. အသင်းတော်ရာပေါင်းများစွာကူညီထဲမှာဆာပဖြစ်ခဲ့သည်။
အစ်ကို Garcia ကမိမိအတရားနှင့်တင်ပြချက်များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောသူသည်တစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားဧဝံဂေလိအားမိမိအပြုသဘောဆောင်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုကူးစက်တတ်ကြောင်း, သင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဤကျွန်ကိုအားပေးအားမြှောက်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏ခန္ဓာကိုယ်မှလူမျိုးကိုစိုးအနိုင်ရတဲ့၏ဆုကြေးဇူးကိုနှင့်အတူညီကို Garcia ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ပါသည်။ သူအသင်းတော်များအကြားခရစ်တော်နှင့်ကမ္ဘာ့ဧဝံဂေလိ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်ကမ္ဘာ၏မြောက်မြားစွာအစိတ်အပိုင်းများမှခရီးထွက်ခဲ့သည်။ အစ်ကို Garcia ကန့်မှသာအကျိုးစီးပွားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ကယ်တင်ရှင်၏ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်သည်။
သငျသညျအထကျမီဒီယာကိုမမွငျနိုငျလြှငျ - ကဒီမှာ download လုပ်ပါ: MP3